July | 2011 | My Burmese Blog
Monthly Archives: July 2011	Thoughts After Soccer Match
Myanmar VS Oman Soccer Match Interrupted by Crowd with Violence!!
On July 29, 2011	by Htoo Tay Zar	With	7 Comments	- Myanmar news	ဒီနေ့ 28 ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏကွင်းမှာ ကန်တဲ့ မြန်မာ နဲ့ အိုမန် အသင်းရဲ့ ဒုတိယအကျော့ ပွဲစဉ်ကို သွားပြီး သတင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲဟာ 2014 FIFA World Cup Brazil Qualifier အတွက် ကန်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ အကျော့ အိုမန် နိုင်ငံမှာ ကန်တုန်းက မြန်မာက ၂ ဂိုး ၀ နဲ့ ရံှုးခဲ့ပြီးသားပါ။
Photo News, PhotoJournalist	Continue Reading
Burmese Traditional Musical Instruments in Action
On July 27, 2011	by Htoo Tay Zar	With	6 Comments	- Photography	ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၅ ရက်နေ့က ကွျန်တော် နဲ့ ကိုရဲအောင်သူ ၂ ယောက် ရန်ကုန် အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှု့ နှင့် အနှပညာ တက္ကသိုလ် (National Arts And Culture University, Yangon) ကို အရောက်သွား ဓာတ်ပုံ ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အစက ကိုရဲအောင်သူ ရဲ့ project documentary အတွက် ရိုက်ရင်းကနေ အဲဒီအတွက် မသုံးဖြစ်တော့ပဲ စိတ်ပြောင်းသွားကြတာပါ။ ကျောင်းထဲကိုတော့ နန်းညီ ကျေးဇူးနဲ့ ရောက်သွားကြတယ်။
Documentary, Photography	Continue Reading
Trip to Pyin Oo Lwin (July 2011)
On July 21, 2011	by Htoo Tay Zar	With	4 Comments	- Personal, Photography	ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ ညက မန်းလေးဘက်ကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးက ကပ်မှ သိရတာကြောင့် အိမ်ကိုတော့ အဲဒီနေ့ မနက်ကမှ ပြောဖြစ်တယ်။ အမှန်တော့ အခြားကိစ္စမဟုတ်ပဲ ဘလော့ဂ်ဂါ သယ်ရင်း နန်းညီ အိမ်ပြန်တာကို အလည်လိုက်ကြတာပါ။ မန်းလေးကို စနေမနက် အစောမှာ ရောက်သွားပြီး အသိအကိုတစ်ယောက် အိမ်မှာတည်းကြပါတယ်။ ရောက်ရောက်ခြင်း မနက်မှာပဲ ခဏနားပြီး ကားငှားပြီးတော့ ပြင်ဦးလွင် တက်ဖြစ်ကြပါတယ်။
Photography, Trip	Continue Reading
64th Anniversary Martyrs’ Day
On July 19, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Myanmar news	ဂျူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့ ယနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ အာဇာနည်နေ့မှာ မနက်စောစောပဲ အိမ်ကနေထွက်ပြီး ရွှေဂုံတုိင်ဘက်ကို သွားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ အတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့၊ အာဇာနည်ကုန်းသွားဖို့ အဲဒီမှာ ချိန်းထားလို့ပါ။ မနက်စာကို အဲဒီနားက ထမင်းကြော်ဆိုင်လေးမှာပဲ စားဖြစ်တယ်။ အနားတစ်ဝိုက်က ဆိုင်တွေ အားလုံးမှာ အဖြူဝတ် လူကြီး၊ လူငယ် တွေ အများကြီးနဲ့ တွေ့ရပါတယ်။
Create DIY Super Macro Lens
On July 19, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Camera	How to create SuperMacro lens (Как сделать СуперМакро объектив) from lozzless on Vimeo.
18 ~ 55 kit lens ကနေ ပြောင်းပြန်တပ်ပြီး marcro လုပ်ရိုက်လို့ ရတာ အရင်ကတည်းက tutorial တွေဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အသေးစိတ်ပြန်ဆင်တာမျိုးတော့ အခုမှ ပထမဆုံး တွေ့ဖူးပါတယ်။ motor တွေက အစ အကုန် ပြန်ဆင်ထားတာတွေရတယ်။ Kit lens ဆိုပေမယ့် ကွျန်တော်တို့ အတွက်တော့ စမ်းမကြည့်ရဲပါဘူး။ တော်ကြာ အလုပ်မလုပ်တော့မှ မဝိုက်နိုင်တော့ပဲ ဖြစ်နေမယ်။ DIY video ပါ ကြည့်လို့ ကောင်းပေမယ့် result photo မပြတာတော့ ဟာတာတာကြီး နဲ့ ပြီးသွားတယ်။
Camera, Canon	Split Screen ~ A Love Story
On July 13, 2011	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Myanmar news	Aung San Suu Kyi At Bagan Ancient Kingdom (Photo ~ Unknown/ Via Facebook)
အန်တီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုဂံသွားတဲ့ ရက်တွေက သတင်းတွေ facebook မှာ ဖတ်ရတယ်။ တစ်ရက်က ဘုရားက အပြန် ပုဂံ သရပါတံခါး နားက သရပါ3ဆိုင်မှာ ထမင်းစား တယ်ဖတ်ရတယ်။ အဲဒီတုန်းက အမှတ်တစ်မှတ်ပဲ ပုဂံက ပြီးခဲ့တဲ့လကမှ သွားခဲ့တာဆိုတော့ စဉ်းစားနေတာ အဲဒီ အမည်နဲ့ ထမင်းဆိုင်မတွေ့မိပါဘူးလို့။ မနေ့ကမှ ကိုရဲအောင်သူ ပုဂံမှာ အန်တီစု ပုံရိုက်လာတာတွေ ပြတော့မှ အဲဒီဆိုင်က မကြည် ခေါ် အပျိုကြီးနဲ့ အမျိုးတွေရဲ့ ဆိုင်မှန်းသိတော့တယ်။